Midowga Yurub - BBC News Somali
UK oo digniin hor leh u dirtay midowga Yurub
Maamulka cusub ee UK ayaa ku adkeysanaya hannaanka ka bixitaanka Midowga Yurub
4 Agoosto 2019
Soomaali isdilay oo bannaanka soo dhigay fashilka Qaramada Midoobay ee Liibiya
Nin Soomaali ah oo lagu hayay xero ayaa isgubay, arrintaas oo horseedday inay soo cusboonaadaan dhalleecaynta loo soo jeedinayay Midowga Yurub iyo siyaasadda Qaramada Midoobay.
Waddamada iyo Macamiisha qaaraddan Afrika ma waxaa la gudboon inay kala doortaan teknooloojiyadaha Mareykanka iyo Shiinaha?
Dad loo xirxiray Faras awgii
Faraska oo la ildarnaa tabardarro iyo kuleyl saa'id ah waxaa lagu daryeelayaa xaruun lagu xannaaneeyo xayawaanaadka.
Slovakia oo yeelatay madaxweynihi ugu horreeyey oo dumar ah
Zuzana Caputova, oo ah haweeey u dhaqdhaqaaqda ka hortagga musuqmaasuqa siyasaddana ku cusub ayaa ka guuleysatay musharrax xisbiga talada dlkaasi haya.
Madaxweynaha Nigeria oo hoggaanka u haya natiijooyinka doorashada
Madaxweyne Muxamaduu Buhari ayaa ilaa iyo hadda hogaaminaya natiijada codadka la tiriyay ee doorashada guud ee dalka Nigeria, waxa uuna ku guuleystay codadka afar ka mid ah 36-da gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay.
Dowladda Turkiga ayaa wajahaysa cadaadis horleh oo ah inay joojiso dahabka ay ka iibsanayso dalka Venezuela, BBC-da ayaa sidaasi ogaatay.
Nin boqor ahaa oo diiddan in lagu sameeyo baaritaan dhacaan oo aad loo daneynayo
Warar la isla dhex marayo ayaa sheegaya in arrintani ay ka mid tahay sababaha ku kallifay inuu xilka boqortooyada ka dago
2 Febraayo 2019
Hoggaamiyeyaasha EU oo heshiis ka gaaray ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga Yurub
Heshiiska ka bixitaanka Midowga Yurub ee Ingiriiska waxaa ansixiyay hoggaamiyeyaasha reer Yurub, sida uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Midowga Yurub Donald Tusk.
Madaxweynaha Faransiiska oo dhaleeceeyay dibadbaxyada qalalaasaha wata ee dalkaasi gilgilay
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa waxa uu cambaareeyay dibadbaxyada qalalaasaha wata ee dabayaaqada todobaadkii labaad ka dhacayay guud ahaan waddankaasi.
Soomaali sheegatay doontii ay qarxiyeen ciidanka midowga Yurub ee la dagaallanka burcad badeedda
Xoogagga midowga Yurub ee la dagaallanka burcadeedda Soomaaliya ayaa sheegay in Isiintii ay qarxiyeen doon ay leeyihiin burcadeed Soomaaliyeed, taasoo weerartay Markab sitay calanka Hong kong.
Yurub oo sheegtay in ay qayb ka sii ahaan doonaan heshiiska Niyukleerka Iiraan
Madaxa siyaasadda arimaha dibadda u qaabilsan Midowga Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay inay ka shaqeyn doonaan sidii ay reer Yurub ula ganacsan lahaayeen Iran.
Wadaxaajoodka ka bixitaanka UK ee Yurub oo meel xasaasi ah maraya
Waxaa meel xasaasi ah maraya wadahadaladii ka bixitaanka Britain ee midowgaYurub.
21 Agoosto 2018
Poland:Muran ka dhashay isbadal lagu samaynayo sharuucda garsoorka
Rai'sul wasaaraha dalka Poland ayaa difaacay sharciyada cusub ee dalkaasi oo ku qusbaya garsoorayaasha in ay howlgab noqdaan marka ay gaaraan 65 sano.
Dalal loo haysta in sirddoonka Mareykanka ay siiyeen xabsiyo lagu jirddilay maxaabis
Garsoorayaasha maxkamadda Yurub ayaa go'aamiyay in dalalka Lithuania iyo Romania inay ku xadgudbeen xuquuqda labo qof oo lagu tuhunsanaa inay ka tirsanaayeen ururka Al Qaacida ayna u ogolaadeen laanta sirddoonka CIA inay jirddilaan maxaabista.
Ingiriiska oo maxkamad lagula tiigsaday in aanu waxba ka qaban dikhowga hawada
Midowga Yurub ayaa maxkamad la tiigsaday Ingiriiska oo ku eedeeyey in uu mudo dheer ka cago jiidayo in uu fuliyo xeerka xadidaada neefta nitorogen dioxide (NO₂).
Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay baaqiisa ah in heshiiskiiskii Niyukleerka ee 2015 ay Iiraan ay la galeen wadamada quwadaha waawayn uu ahaa "kii ugu xumaa ebed " waxa uuna ku hanjabay in uu ka bixi doono.
25 Abriil 2018
Spain: Aabaha wiil lagu tahriibinayay boorso oo xabsi ka badbaaday
Nin u dhashay Ivory Coast oo wiilkiisa siddeed sano jirka ah, inta boors la geliyay loo kala tahriibiyay Morocco iyo Spain ayaa ka badbaada xukun xabsi.
21 Febraayo 2018
Laba helikobtar oo militariga faransiiska ay leeyihiin oo burburay
Laba diyaaradood oo ah kuwa ciidanka ayaa ku burburay Koonfurta Fraansiiska halkaasi oo uu khasaaro ka dhashay.
2 Febraayo 2018
Wariyeyaal caan ka ah BBC-da oo ogolaaday mushaar dhimis
Wariyeyaasha caanka ah ee ogolaaday in musharkooda la dhimo waxaa kamid ah Huw Edwards, Nicky Campbell, John Humphrys, Jon Sopel, Nick Robinson iyo Jeremy Vine
Maxamed: Dadkii doonta tahriibka ila saarnaa oo dhan kaligey ayaa ka badbaaday
Sida lagu garto beenaalaha... bal tijaabi xeeladdan loo adeegsanayo xarafka 'Q'
Sawir laga qaaday carruur qoxooti Suuriya u dhashay oo si weyn loo hadal hayo
"Istaag... waa amar ee i guurso!" - Lamaane isku aroosay qori caaraddii
Muuqaallada dawooyinka beenta ah ma lacag baa ka soo gadho YouTube?